news Mizzima News, 05 Jun 2014 (7 years ago )
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှတပ်မတော်နှင့်အတူသုံးလအတွင်းအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်အသစ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်မှဇွန်လ(၄)ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှဥက္ကဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်မူတူးစေးဖိုးဦးဆောင်သောကေအဲန်ယူကိုယ်စာ...
ဖဲအပူၤကွံာ်နွံအကတၢၢ်ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်,ပှၤဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဝဲဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်ထီၣ်တခီဒ်သိးကကိးဃီၤကဒီးဝဲတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒီးတကတီၢ်ဃီဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအီၣ် စါစူးကၠံၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဘၣ်ဃးတၢ်လဲလိာ်ဘှီသီထီၣ်က့ၤတၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. က...
news Irrawaddy News, 05 Jun 2014 (7 years ago )
news Democratic Voice of Burma, 06 Jun 2014 (7 years ago )
ဖဲလၢမုၢ်ပျဲာ်အနံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ,ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(KNU)ခၢၣ်စးကရၢဆီၣ်ထွဲဝဲဒၣ်ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ခိၣ်သ့စ့ၣ်လၢကဒိးဃုထၢက့ၤအသးလၢကီၢ်ခိၣ်အလီၢ်ဖဲလၢခဲကိာ်တဝီတၢ်ဃုထၢအပူၤ ခီဖျိလၢအဝဲနုာ်လီၤမၤသကိးဘၣ်တ့ၢ်တၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဖဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အကျိၤအကျဲအပူၤအံၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခၢၣ်စးကရၢလၢဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိာ်မဲအ...
news Eleven Media, 07 Jun 2014 (7 years ago )
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးသည်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအသင်းတွင်ပါဝင်သောသူများနှင့်ပါဝင်ခြင်းမရှိသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကိုတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ် အခတ်ရပ်စဲရေးဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်လက်ခံယုံကြည်လာအောင်ကြိုးစားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်နေပြည်တော်၌ကရ...
Dawei Farmers Offeredasingle “House-Hold” Land Plot for every Three Acres of Confiscated Farmland
news Mizzima News, 06 Jun 2014 (7 years ago )
The Tenasserim Division government has offered farmers whose land was confiscated onlyasingle “house-hold plot” of land for every three acres of farmland seized by the divisional government. The farmland was seized by the Tenasserim government last year to construct the project, which is located i...
news Democratic Voice of Burma, 11 Jun 2014 (7 years ago )
news Karen News, 11 Jun 2014 (7 years ago )
Karen community groups have for the first time have called on the Karen National Union to show more transparency and openness in their ongoing peace talks with the Burma government. Six Karen civil society groups based in Burma and overseas made their call for the meetings between the KNU and gov...